Shirweyne Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed oo qabanqaabadiisu Baydhabo ka socoto – idalenews.com
Waxaa magaalada Baydhaba ka socda qabanqaabada shir la doonaayo in lagu qabto magaalada xarunta u ah gobalka Bay ee degmadiisa Baydhabo. Shirka oo ay qabanqaabadiisa ku howlan yihiin siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle ayaa la sheegey in la doonaayo in lagu dhiso maamul goboleed ka kooban lixda gobal ee Koonfurta Soomaaliya.
Guddiga Farsamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa kulankii ay la qaateen qeybaha kale ee bulshada ka sheegey in bisha Janaayo 20 Keeda la qorsheeyey inuu furmo shirwaynaha Maamul Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dastuurka Federaalka Soomaaliya ayaa sheegaaya in 18kii gobal ee ay ka tagtey dowladii dhexe ee Soomaaliya noqonayaan gobalada rasmiga ee dalka ka jira sidaas darteedna inta gobal ee is ogol ay dhisan karaan maamul goboleed ku qotama rabitaanka shacabka goboladaas oo noqon kara labo gobal iyo waxii ka badan.
Lixda Gobal ee ku yaala Koonfurta Soomaaliya ee kala ah Shabeelaha Hoose, Bay , Bakool , Gedo, Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose ayaa waxaa ka aloosan muran u dhaxeeya dadyowga Soomaaliyeed ee wada degan goboladaas kuwaas oo qolo walbaa ay maamul iyada u gaara ay rabaan inay dhistaan.
Gobolada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo ayaa dadka ku dhaqan qaarkood ay doonayaan in ay halkaasi kaga dhawaaqaan maamul la magac baxey Jubbaland State, halka Gobalka Banaadir iyo Shabeelaha Hoose qaar dadyowga dagan ay iyaguna ku howlan yihiin Maamul Goboleed la magac baxey Banaadir State, Maamulkaan ka kooban shabeelaha hoose iyo Gobalka Banaadir ayey sheegeen in hal gobal ahaayeen markii dalku ka koobnaa 8da gobal.
Dowlada Federaalka ayaan iyadu diyaarin wax sharuuc ah oo kala haga dowlad goboleedyada raba iney dhismaan iyo xalinta muranka ka dhalan kara xaduudaha iyo wada shaqaynta dowlada dhexe iyo maamuladaas hardamaaya.
Wareysi: Gaandi oo ka hadlay Arrimaha Maamul U Sameynta Jubbaland iyo taariikhdii ay howshaan soo martey